क्रोमका लागि Scraper विस्तारमा Semalt गाइड
कुनै पनि व्यवसाय बाँच्न र अन्ततः बढ्नको लागि, यसको प्रतिस्पर्धीहरू र विभिन्न जोखिमहरू भन्दा अगाडि रहन आवश्यक छ। विश्लेषणात्मक डेटामा आधारित निर्णयहरू लिनु यी समस्याहरू बिर्सने एक निश्चित तरिका हो। त्यस्ता डाटा डाटा स्क्र्यापि through मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यहाँ क्रोमको लागि सजिलो स्क्र्यापर विस्तार आउँदछ: यसले डेटा स harvest्कलनको प्रक्रियालाई मात्र सहयोग पुर्‍याउँदैन, तर जटिल सेटअप बिना नै द गो मा स्क्र्याप गर्न पनि सम्भव बनाउँदछ।
Scraper कसरी प्रयोग गर्ने
१. तपाईले गर्न पर्ने पहिलो कुरा भनेको एक्स्टेन्शन स्थापना गर्नु हो, त्यसैले क्रोम वेब स्टोरमा जानुहोस्, "स्क्र्यापर" को लागी खोजी गर्नुहोस् र क्रोममा थप्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्।
२. तपाईले वेबसाईटमा नेभिगेट गर्नुहोस् जुन तपाईबाट डेटा स्क्र्याप गर्ने मनसाय राख्नु भएको छ, तपाईले रूचि राख्नु भएको प्रविष्टिलाई हाइलाइट गरेर मार्क गर्नुहोस्। यसमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र पप अप हुने मेनूमा "समान स्क्र्याप गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्।
So. त्यसो गर्नाले छुट्टै स्क्रैपर कन्सोल विन्डो सुरूवात गर्दछ। यहाँ, तपाईंले स्क्र्याप गरिएको डाटाको सूची देख्नुहुनेछ।
The. सामग्री बचत गर्न "Google कागजातमा बचत गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्, यसले स्वचालित रूपमा गुगल स्प्रिडशिटमा डाटा निर्यात गर्दछ।
यदि तपाईं अधिक डाटा स्क्र्याप गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं उन्नत तरीका प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। नोट गर्नुहोस्, उपकरणसँग काम गर्न यो धेरै सजिलो हुनेछ यदि तपाईंसँग HTML को केही ज्ञान छ भने। मानौं तपाईं स्रोतबाट डाटा स्क्र्याप गर्न चाहानुहुन्छ जुन टाइम श्रृंखला डाटामा आधारित अभिलेख राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा, यदि तपाईंले माथि वर्णन गरिएको विधि प्रयोग गर्नुभयो भने, तपाईं गल्फिएको डाटा पाउनुहुनेछ।
यस मुद्दालाई सुल्झाउन, तपाईं HTML र XML क्वेरी भाषा XPath को रूपमा परिचित गर्न सक्नुहुन्छ। यसले के गर्छ? XPath ले प्रत्येक चयनमा समावेश विभिन्न तत्वहरूको सन्दर्भमा डेटा पहिचान गर्दछ। निम्नको बारेमा कसरी जान्नेका लागि निम्नलिखित निर्देशनहरू छन्:
१. स्क्र्यापर कन्सोलमा जानुहोस्, माथिको बाँयामा तपाईंले "XPath" बटन याद गर्नुपर्दछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र प्रारम्भिक तालिका भेला गर्न अगाडि बढ्नुहोस्।
२. तपाईंले सही तत्वका लागि XPath लेख्नु पर्छ। हालको XPath जसले सम्पूर्ण जानकारी समावेश गर्दछ यो "// div  / div  / div  / div" जस्ता ढाँचामा प्रदर्शित हुनेछ। <div> तत्व कम्प्युटर द्वारा HTML कागजातमा मान्यता प्राप्त हुनेछ।
The. मान्यता प्राप्त डाटा अलग गर्न तपाईंले स्क्र्यापर स्तम्भहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसो गर्न तपाईले बिभिन्न प्रकारका जानकारीहरू खोज्नु पर्छ जुन तपाईसँग उपलब्ध छ। डाटामा निर्भर गर्दै तपाईं स्क्र्याप गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंको शीर्षकहरू हुन सक्छन्। यी शीर्षकहरू डाटाको प्रत्येक सेटको छेउमा अवस्थित छन्। तिनीहरूसँग ट्यागको साथ हुन्छ यस अवस्थामा, <b> ट्याग।
Element. निरीक्षण तत्वको प्रयोग गरेर तपाईको XPath मा <b> ट्याग थप्नुहोस्। अब तपाइँ यो पहिलो स्तम्भलाई "शीर्षक स्तम्भ" को रूपमा लेबल गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यसले शीर्षकहरू तल सूचीकृत गर्दछ। तपाइँलाई चाहिने प्रत्येक स्तम्भका लागि बिभिन्न XPaths सिर्जना गर्न अगाडि बढ्नुहोस्।
The. स्क्र्यापमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्स्टेन्सनले स्वचालित रूपमा लगत कटनी गर्दछ र यसलाई तपाईंले सेट गरेको विभिन्न स्तम्भहरूमा व्यवस्थित गर्दछ।